Senator Xuseen “Xukuumada Soomaaliya Waxey Rabtaa In Qof ay Magacaabatay Geyso Baydhabo” – Idil News
Senator Xuseen “Xukuumada Soomaaliya Waxey Rabtaa In Qof ay Magacaabatay Geyso Baydhabo”
MUQDISHO(IDIL NEWS)-Senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ah Xoghayaha Guddiga Dastuurka labada Aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, ayaa si kulul uga hadlay Ciidamada dowladda ay ku daabuleyso magaalada Baydhabo.
Senatorka ayaa sheegay in Baydhabo aaney u baahneyn Ciidan dheeraad ah, balse muhiim ay tahay in la xoojiyo Xildhibaanada u dhowaanshohooda maadaama iyaga ay yihiin kuwo wax dooranaya.
Waxaa uu sheegay inay aheyd in la geeyo Ciidamo dheeraad ah wadada isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo, si ay sugaan amniga wadadaas.
Senator Xuseen ayaa ku eedeeyay Xukuumadda inay faragelin toos ah ku heyso doorashada Koofur Galbeed.
“Waxaa faragelin xoogan lagu hayaa guddigii doorashada, doorasho madax banaan meesha maka soocto, waxaa laga yaabaa iney iscasilaan guddigii doorashada, Xukuumadana waxey rabtaa iney magacaabato qof ay iyada rabto” ayuu yiri Senator Xuseen.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ee Fadhigeedu yahay Xamar, ayaa tan iyo Doraad waxaa ay ciidamo geysay Baydhabo kuwaas oo Tiradooda lagu sheegay 200 oo askari, Iyadoona Warar soo baxaya ay sheegayaan in Askartan ay ilaalo ka heyn doonaan amniga xarunta Doorashada ay ka qabsoomeyso.
Si Kastaba, Doorahsada Koofur Galbeed, ayaa markii 3-aad dib u dhacday, waxaana lagu balamay inay qabsoonto 19-ka bishan December oo ku aadan maalinimo Arbaca ah.